नेपाल सुपर लिगः काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा रहँदै प्ले अफमा ! « MNTVONLINE.COM
काठमाडौँ । नेपाल सुपर लिगअन्तर्गत आज भएको अन्तिम खेलमा काठमाडौंँ रेजर्सले एफसी चितवनलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ । कुल ६ खेलबाट १३ अंक जोडेको काठमाडौँ लिगको शीर्ष स्थानमा रहँदै प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा काठमाडौँका लागि विदेशी मेसोउके ओलोमोऊ र संजोग राईले एकएक गोल गरेका थिए । चितवनका लागि सान्त्वना गोल राजीव लोप्चनले गरे । खेलको १७ औंँ मिनेटमा काठमाडौँका ओलोमोउले गोल गर्नुभएको हो । यस्तै खेलको ३४ औंँ मिनेटमा राईले काठमाडौँका लागि दोस्रो गोल गरे ।
यसैगरी चितवनका लागि खेलको ४०औंँ मिनेटमा लोप्चनले गोल गरेका हुन् । खेलको ४४ औंँ मिनेटमा काठमाडौंँका विश्वास श्रेष्ठले हानेको बल गोलपोष्टबाट बाहिरियो । यस्तै खेलको ८१ औंँ मिनेटमा काठमाडौंँका प्रिजेन तामाङ गोल गर्नबाट चुकाए ।
चितवनले लिगका कुनै पनि खेल जित्न सकेन । चितवनले ६ खेलमा चारमा हार तथा दुई खेलमा बराबरी खेल्यो । काठमाडौंँले अब फाइनल प्रवेशका लागि मंगलबार धनगढी एफसीसँग प्लेअफमा खेल्नेछ ।
कोपा अमेरिका २०२१ : चिलीसँग रोकियो अर्जेन्टिना
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी डिजाइन गर्न प्रतिस्पर्धा खुला, उत्कृष्टलाई एक लाख पुरस्कार !
कोपा अमेरिकामा आयोजक ब्राजिलको विजयी सुरूवात
युरो २०२० : इंग्ल्याण्ड, अष्ट्रिया र नेदरल्याण्डस् विजयी, आज तीन खेल हुँदै